Maxaa kala socotaa socdaalka Xasan Sheekh iyo Sh Shariif ee Cadalae & qorshaha beelaha Mudulood.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maalinimadii shalay ahayd gaarey degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe oo katirsan maamulka Hirshabeelle.
Mas’uuliyiintan hore waxaa garoonka diyaaradaha Cadale ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, xubno katirsan barlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ku nool.
Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo soo dhoweynta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya haatanna u taagan xafiiska ay deegaanka u yimaadeen arrimo quseeya masiirka Hirshabeelle iyo guud ahaan Soomaaliya.
Dhanka kalena, xog hoose oo aannu helnay socdaalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ku tageen Cadale uu xiriir la leeyahay shir halkaasi uga furmi doono beelaha Muddulood iyo siyaasyiinta ka soo jeeda oo masiirka dalka iyo doorashada looga hadlayo.
Arrinta ugu muhiimsan ee ay ka arrinsan doonaan ayaa xiriir la leh sidii ay beeshu sanadkaan u heli lahayd madaxweynaha Soomaaliya, isu tanaasulka musharixiinta madaxweynaha ee beesha iyo soo saarista xildhibaano aan wax xiriir ah la lahayn madaxtooyada Soomaaliya iyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.